Efa nametraka ny taratasy eny anivon’ny Inspektoran’ny asa izy ireo ary tsy hihemotra mihitsy ny amin’ny fitakiana. Tsy fahaiza-mitantana, fanaovana tsinontsinona ny mpiasa sy ny maro hafa no anton’ny fanapahan-kevitra. Nilaza izy ireo tamin’ny fanambarana nataony omaly alarobia fa efa feno ny kapoaka ary tsy afaka handefitra intsony ny amin’ny tsy fahaiza-manaon’ny Tale jeneraly. Ho avy hanatevina ity hetsika fitokonana ity, hoy izy ireo ny mpiasa rehetra manerana ny Nosy raha mbola miziriziry amin’ny heviny io tompon’andraikitra io. Taorian’ny fitakiana nataon’ny polisy izany dia nijoro ihany koa ny sendikan’ny JIRAMA ny amin’ny hetahetany. Miandry hatrany ny fahaiza-manaon’ny fitondrana ny rehetra.